Free Online AVI in Converter MOV
> Resource > Video > Top 5 Free Online AVI in Converter MOV
AVI waa qaab windows media ah. Sida aan ognahay, Windows iyo Mac marnaba u hesho si fiican uu ula midba midka kale. Waxaa laga yaabaa inaad la kulmi xaaladda, in aan ciyaari karo files AVI aad ku Mac. Marka uu aqrinayo xaaladan wareerka, sida loo wax ka qaban? Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa xal fiican leh 5 sare ugu fiican oo lacag la'aan ah avi online in mp4 video converters iyo mid desktop video Converter. Sidaas, oo dhan converters talinayaa iska saari doona walwal iyo walaac aad. Haddii aad rabto in ka badan boosaska badan oo dhaqso video Converter ah, halkan waxaan ku talin doona desktop video Converter.
Zamzar oo ujeedadiisuna tahay in dadka bixinta xoriyadda ciyaaro kasta video istareexsan oo aan la dhaafi karin qaab. Hawlaha saftay kaliya ma ahan wax been ah diinta videos, laakiin sidoo kale been degsado videos, diro iyo maaraynta files. In terming ee diinta avi in ​​MOV online, waxaad u baahan tahay oo kaliya in la raaco 4 tallaabooyin. Mid aad u fudud oo fudud! Fadlan la soco in tani ay avi online si xor ah u Converter MOV ma taageeri si loogu badalo files ka badan 100 MB.
Apowersoft waxaa ka go'an in uu bixiyo users leh waayo-aragnimo ugu wanaagsan ee diinta video iyo maqal ah. Hadafka shirkaddu waa in ay soo dhaw raaxadeeda waxa nolosha digital iyo multimedia dadka. Iyadoo fudud hab 3 tallaabo ah, file avi aad loo rogi doonaa in MOV in dhowr daqiiqo. Kaliya si fudud Waxaad gali kartaa file ah, doortaan qaab wax soo saarka, iyo ugu dambayntii guji cagaaran "Beddelaan" icon ay u bilaabaan qaab beddelidda.
BenderConverter taageerada diinta mp3, avi, mpeg, flash video, iPod / iPhone, iPad, GIF, jpeg iyo qaabab loo jecel yahay oo kale. Waxay u baahan tahay in aad file diirada u noqon in ka yar 100 MB. Waxaad dooran kartaa qaabka aad wax soo saarka sida qaab gaar ah ama sida qalab. By si fudud adiga oo riixaya ah "Beddelaan" button, waxaad bilaabi kartaa si loogu badalo avi in ​​mp4 online.
ConverFiles shaqeeya aad bixiya qalab video Converter xor ah oo fudud oo awoodda diinta noocyada kala duwan ee video. Tani avi online si xor ah u Converter MOV karto file a in ka badan 250 MB. Size file Its waa aad u balaaran marka la barbar dhigo BenderConverter. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan aad file deegaanka, xulo qaab wax soo saarka aad, ka dibna loogu badalo. Waa video qalab Converter istaahila in aad u!
Cabbirka file ugu badan ee Cellsea Converter waa 25 MB. Haddii aadan dan size file waxaa ay taageertaa, waxa ay noqon doontaa a video Converter cajiib ah oo aad u. Waxay awood u aad si loogu badalo avi ilaa 8 qaabab, FLV, AVI, MOV, Mpg, VOB, MP4, wmv, dhexena, 3GP, DIVX. Waxaad gali kartaa file ah oo ka PC, ama uun galaan url ah si loogu badalo si ay u bilaabaan si loogu badalo avi si online MOV. Tani avi online si xor ah u Converter MOV ma ka shaqeeya oo keliya sida Converter video ah, laakiin sidoo kale a video editor awood badan.
Wondershare Video Converter waa Converter desktop video. Tani avi in ​​Converter MOV waa qalab ugu awooda badan dhexdooda kale 5 converters online. Waa ma aha oo kaliya Converter video ah, laakiin sidoo kale editor video ah, gubi DVD iyo downloader YouTube ah. Ka sokow, waxaad noqon doontaa yaabeen ay fududahay in la isticmaalo interface iyo xawaaraha diinta. Just isku day oo wuxuu ku raaxaysan aad video meel kasta iyo waqti kasta.
Sida loo dar Video inay Audio
A Good iyo Reliable Video Multiplexer
Samee Image Flash ah Scroller ama Slider fudayd